नेपालमा भित्रियो ‘ओमिक्रोन’, विदेशबाट आएका दुईजनामा संक्रमण पुष्टि, लक्षण देखिएन – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
नेपालमा भित्रियो ‘ओमिक्रोन’, विदेशबाट आएका दुईजनामा संक्रमण पुष्टि, लक्षण देखिएन
११ माघ २०७८, मंगलवार ०३:४९
काठमाडौं । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले नेपालमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
एकजना ६६ वर्षीय विदेशी नागरिक र उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका ७१ वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा यही मंसिर १९ गते ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार उहाँहरूको मंसिर ७ गते परीक्षण गरिएको थियो । दुवैजनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए । गत मंसिर ३ गते नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै ६६ वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुभएको थियो । नेपाल आउँदा नियमानुसार पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो । तर, कोभिड-१९ सँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ विधिबाट परीक्षण गर्दा मंसिर १९ गते ओमिक्रोन नेपालमा पहिलोपटक पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो भेरियन्ट पहिलोपटक २४ नोभेम्बर २०२१ मा दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको थियो । हालसम्म यो भेरियन्ट विश्वका ३५ देशहरूमा फैलिसकेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यी देशहरूमा सोमबारसम्म ओमिक्रोनबाट ५७४ जना संक्रमित देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार दक्षिण पूर्वी एसियामा ओमिक्रोनको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका केही देशहरूमा समेत यो भेरियन्ट पुष्टि भइसकेको छ । यो भाइरस सर्ने दर र संक्रमणबाट हुने स्वास्थ्य जटिलताका सम्बन्धमा बैज्ञानिक तथ्यहरूको खोज भइरहेको छ । यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले पनि विभिन्न प्रयासहरू जारी राखेको छ ।
अहिले संक्रमित दुवैजना सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । हाल उहाँहरूमा कुनै लक्षणहरू नदेखिएको र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएका ६६ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको र सबै स्वस्थ रहेको पाइएको छ । ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने जोखिम भएपछि नेपालले पनि स्वास्थ्य सतर्कतामा जोड दिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकाहरूमा यात्रुहरूको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न सबै यात्रुको नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको, खोपको विवरण लिने गरेको, लक्षण तथा चिन्हहरूको जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको तथा हवाई र स्थल नाकाहरू भई प्रवेश गर्ने पूर्ण मात्रा खोप नलगाएका र शंकास्पद सबै यात्रुहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ । एन्टिजेन परीक्षणमा पोजेटिभ फेला परेकाहरूको नमुना संकलन गरी पिसिआर गर्ने र शंकास्पद नमुनाहरूको जिन सिक्वइन्सिङ गर्ने गरिएको छ । यसका साथै विगत एक महिना अगाडिदेखि पोजेटिभ भएका नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले कोभिड-१९ का अरू भेरियन्ट जस्तै ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न पनि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरूको पालना (मास्कको सही प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने तथा हात धुने कार्य, हावा आवतजावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने) र खोपको प्रयोग महŒवपूर्ण हुने भएकाले सबैमा मापदण्डको पालना गर्न र खोप अभियानमा सहभागिता हुन अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञहरू भन्छन् : त्रसित नबनौँ, सजग रहौँ
ओमिक्रोन भेरियन्ट कोभिड-१९ कै एक उत्परिवर्तितस्वरूप भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नै यसबाट जोगिने उपाय भएकोे विज्ञहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार ओमिक्रोन पनि जोगिनसक्ने संक्रमण भएकाले पहिलेका दुईवटा लहरमा अपनाइएका उपायहरू नै फलो गर्नुपर्छ । कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले पनि सिकिस्त हुनबाट जोगाउने भएकाले सरकारले खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा डा. पुनको जोड छ ।
जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता डा. समिरमणि दीक्षितले पनि कोभिडको जनुसुकै भेरियन्ट आए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नु र खोपको दायरा बढाउनु नै जोगिने उपाय भएको धारणा राख्नुभयो । ‘सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्‍यो, सरकारले बढीभन्दा बढी खोप वितरण गर्नुपर्‍यो जनुसुकै भेरियन्ट आए पनि त्यसबाट जोगिने उपाय यिनै हुन्’ उहाँले भन्नुभयो । जोखिम वर्गमा परेका दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज पनि दिएर जोगाउन सकिने डा. दीक्षितको भनाइ छ । सरकारले पूर्ण खोप लगाएका सबैलाई बुस्टर डोज दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्राथमिकता क्रम छुट्याएर बुस्टर डोज खोप दिने सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले बताउनुभएको छ ।
तत्काल लकडाउन हुँदैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाहिर हल्ला फैलिएजस्तो लकडाउनबारे निर्णय नभएको जनाएको छ । सोमबार ओमिक्रोनका दुईजना संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो । झण्डै ४० देशमा देखा परिसकेको यो भेरियन्ट संक्रामक पनि मानिएको छ । ओमिक्रोन फैलनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चासो र चिन्ता बढेपछि सरकारले सचेत गराउँदै लकडाउनबारे निर्णय नगरेको जनाएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारले लकडाउनबारे केही निर्णय नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘लकडाउन हुँदैन । यसबारे सरकारले केही निर्णय गरेको छैन ।’ उहाँका अनुसार ओमिक्रोनको निगरानीका लागि सर्भिलेन्स तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । उहाँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले पालना गर्न र आफ्नो पालोमा खोप लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा पनि ओमिक्रोन देखिएपछि धेरैले सरकारले अब लकडाउन गर्नसक्ने भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले अहिले लकडाउनबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएका छन् । तर, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई सचेत गराएका छन् ।
थप २६५ जनामा कोरोना संक्रमण, दुईजनाको मृत्यु
सोमबार थप २६५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गरिएको सात हजार ११४ पिसिआर र एक हजार ५०३ जनाको एन्टीजेन परीक्षणका क्रममा २६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
योसँगै कुल संक्रमितको संख्या आठ लाख २२ हजार ८३० जना पुगेको छ । कुल संक्रमितमध्ये ६ हजार ३८६ जना सक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै, सोमबार थप ३५७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या आठ लाख चार हजार ९०१ पुगेको छ ।
सोमबार थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ५४३ पुगेको छ । पछिल्लो समय ९८ जना क्वारेन्टिनमा छन् । ११४ जना आइसियु र ३२ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मानव सभ्यताको धेरै पुरानो
प्रशिक्षणका लागि सुवास र
जुम्लामा विपद् सतर्कता अपनाउन
सगरमाथामा रोयल इनफिल्डको झण्डा